DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-5AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-5AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
SOYAALKII WARLALISKA (RADIO)
Aragtida is gaarsiinta bilaa-waayirka ah ayaa ka horreysay daah-furkii “raadiyaha” iyada oo tijaabooyin laga qaaday “telefon wireless” iyada oo la adeegsanayo soo-kicinta is-gaarsiinta iyo gudbinta dhulka, biyaha iyo tareennada, laga soo billaabo 1830-kii. James Clerk Maxwell wuxuu ku muujiyey qaab qoraal iyo xisaabeed ah sannadkii 1864 in hirarka elektromagnetic-ka lagu kala firdhin karo meel bannaan. Waxay u egtahay in gudbinta ula kaca ah ee ulajeedka iyada oo la adeegsanayo hirarka elektromagnetic-ka lagu sameeyay tijaabo uu sameeyay David Edward Hughes qiyaastii 1880, in kasta oo tan loo tixgaliyay inay tahay indho-indheyn waqtigaas. Sanadkii 1888, Heinrich Rudolf Hertz wuxuu aakhirkii awooday inuu caddeeyo mowjadaha elektromagnetic-ka ee hawada lagu faafiyo tijaabo lagu xaqiijinayo aragtida Maxwell ee elektromagnetism.
Injineerka korontada allifay Guglielmo Marconi oo leh gudbiyaha farqiga (midig) iyo qaataha isku xidhka (bidix) ee uu u isticmaalay qaar ka mid ah raadiyadiisii fogaanshaha ugu horreeyay ee 1890s. Guglielmo Marconi wuxuu hindisay raadiyaha kaas oo 1910-kii loo bixiyey raadio. Sannadkii 1909-kii waxa uu Marconi helay abaalmarinta cilmiga sayniska ee qeybta fisikis ee Nobel, ka dib, markii la helay “hirarka Hertzian” (waxay qaadaneysaa ku dhowaad 20-sano ka hor inta ereyga “raadiyaha” aan guud ahaan loo qaadin nooca shucaaca elektromagnetic).
Saynisyahanno badan iyo hal-abuurayaal ayaa tijaabiyey gudbinta iyo ogaanshaha hirarka Hertzian. Aragtida Maxwell ee ah in hirarka iftiinka iyo Hertzian ee elektromagnetic-ka ay ahaayeen isla ifafaalaha mowjadaha kala duwan ayaa horseeday cilmibaareyaasha “Maxwellian” sida John Perry, Frederick Thomas Trouton iyo Alexander Trotter inay u qaataan inay la mid yihiin ileyska indhaha.
Injineerkii reer Serbia ee Ameerikaanka ahaa Nikola Tesla oo soo jeediyay nidaam marin dhulka lagu xidho oo la mid ah raadiyaha 1893-dii. Wuxuu u arkaayay hirarka Hertzian kuwo aan waxtar u lahayn nidaamkooda, maxaa yeelay; “iftiinka” ma gudbin karo ka baxsan khadka aragga. Sannadkii 1892-dii, fiisikiska William Crookes wuxuu wax ka qoray fursadaha telefon wireleska ku dhisan hirarka Hertzian. Qaar kale, sida Sir Oliver Lodge, Jagadish Chandra Bose iyo Alexander Popov, waxay ku lug lahaayeen horumarinta qaybaha iyo aragtida ku lug leh gudbinta iyo soo dhaweynta hirarka elektromagnetic-ka ee hawadooda u gaarka ah aragti ahaan.
Muddo dhawr sano ah oo ka billaabmaysa 1894-tii khabiirkii reer Talyaani ee Guglielmo Marconi wuxuu dhisay farsamadii ugu horreysay ee farsamo ahaan dhammaystiran, nidaam telefon gacmeed ganacsi oo guuleysta oo ku saleysan hirarka hawada ee Hertzian (gudbinta raadiyaha). Marconi waxay muujisay sida loo adeegsado raadiyaha xagga isgaarsiinta millatariga iyo badda waxayna furtay shirkad loogu talagalay horumarinta iyo faafinta adeegyada isgaarsiinta iyo qalabka isgaarsiinta. Aragtida firfircoon ee aagga elektromagnetic oo uu qoray Maxwell, waa warqaddii ugu horreysay ee aragti ahaan ku qeexday faafinta mawjadaha. Qormadani waxay ahayd barta ay Heinrich Hertz ka billawday inay ku muujiso 1888-dii, sida si macmal ah loogu abuuro beeraha noocan oo kale ah si loo ogaado loona cabbiro.
Raadintaani waxay muujisay in hirarka elektromagnetic-ku ay la mid yihiin hirarka iftiinka, iyaga oo si ikhtiyaari ah u leexin kara. Sidaas ayey ku dhalatay faafinta mawjadaha elektromagnetic (hirarka Hertzian ee qaddarintiisa) iyo weliba aasaaska sayniska ee raadiyaha. Sannadkii 1894-kii Guillermo Marconi wuxuu ikhtiraacay qalabkii ugu horreeyay ee awood u leh inuu hawada ku faafiyo telefishanka bilaa-waayirka ah. Markii hore, tan waxaa lagu adeegsaday adeegsiga millitariga iyo howlgalada badda.
Billowgii qarnigii 20-aad, sannadkii 1906-dii, Reginald Fessenden waxay ku guuleysatay gudbinta codka ugu horreeyay. Wuxuu u diray dhawaqa violinkiisa iyo akhrinta marinka laga soo qaatay kitaabka quduuska ah ee ka socda Massachusetts ilaa badda. Sannadkii 1907-dii Fessenden wuxuu ku dhex daray waalka qalabkiisa, kaas oo u oggolaaday ballaarinta masaafada dheer ee keentay in laga isticmaalo adduunka oo dhan.
Raadiyaha Laatin Ameerika waa warbaahintii ugu horreysay ee si toos ah loogu talagalay in loo gudbiyo nuxurka farshaxanka iyo raaxaysiga ama madaddaalada, ayaa ka dhacday Argentina. 27-kii Ogosto, 1920-kii Parfisal, Opera Wagner oo ka yimid saqafka tiyaatarka Coliseo ee magaalada Buenos Aires. Waxaa loo tixgeliyaa in Sociedad Radio Argentina oo mas’uul ka ah gudbinta, sidaas darteed ay tahay idaacadda raadiyaha ugu horreeysay adduunka. Laba sano ka dib waa Santiago de Chile oo ka socda wargayska Meerkuriga, Idaacaddii ugu horraysay ee laga soo gudbiyo Jaamacadda Chile ayaa dhacday.
Intii lagu jiray 1920-meeyadii, raadiyaha wuxuu gaadhay ku dhowaad waddan kasta oo ka tirsan qaaradda. Laga soo billaabo Argentina ilaa Mexico, raadiyayaal badan oo hiwaayad raadiye joogto ah ayaa soo ifbaxay idaacadihii ugu horreeyayna waxay billaabeen inay soo baxaan.
Sooyaalka raadiyaha ee Kolombiya
Sidii Laatin Ameerika inteeda kale, raadiyayaashu waxay yimaadeen Kolombiya horraantii 20-meeyadii. 1923-dii, kaabayaasha lagama maarmaanka u ah gudbinta iyo soo dhaweynta calaamadaha raadiyaha ee dalka oo dhan ayaa billaabay in la rakibo shirkadda kaliya ee hawshan gacanta ku haysay waxay ahayd shirkaddii uu aasaasay Guillermo Marconi: Marconi Wireless Co. Hase yeeshe, kuwa masuulka ka ahaa baahinta warbaahintu waxay ahaayeen hiwaayad raadiye xilligaas; iyagaa looga fadhiyey inay abuuraan nuxur iyo cadaadis maal-gashiga qalabka.
Sannadkii 1924-kii, qalabkii ugu horreeyay ee raadiyaha dhaadheer ayaa la codsaday in la billaabo aasaasidda idaacado, balse, caqabadaha xafiisyada ayaan u oggolaan inay galaan ilaa 1929-kii. Waxaa loo tixgeliyaa in raadiyaha ku yaal Kolombiya uu dhashay sannadkaas. Laga billaabo 1930-kii, xarumo ganacsi oo raadiyayaal aasaasi ah ayaa ku bilaabmay qaab-dhismeed sharci la’aan ah. Xeerarka null iyo shuruudaha sharciga ayaa wali dhibaato ku ahaa raadiyaha adduunka. Intii u dhaxeysay 1931 iyo 1934, Kolombiya arrimihii sharciyeed qaarkood waxay billaabeen in lagu qeexo abaabulka panorama ganacsi ee dhex-dhexaadka ah.
Waqti yar gudahood, idaacaduhu waxay joojiyeen inay noqdaan hiwaayad waxayna noqdeen xirfadlayaal. Waxay ku darsadeen shaqaale mas’uul ka ah hawlo gaar ah qaabyadooda waxayna ku kasbadeen maalgelin dhagaystayaasha. Xayeysiintu si dhakhso ah ayey u soo baxday inay tahay habka ugu weyn ee lagu maalgeliyo.
Sannadkii 1934, dagaalkii u dhexeeyey warka ee u dhexeeyey raadiyaha iyo saxaafadda ayaa ka billaabmay Kolombiya. Iyadoo loo marayo wareegtada 627, wargeyska waqti ayaa ku guulaystay in idaacadaha laga mamnuuco inay baahiyaan war ka hor 12-ka duhurnimo ka dib markii ay ku soo baxday wargeysku.
Dhalashada radiojournalism ee dalka Kolombiya waxaa loo aaneeyaa daboolidda dhacdadii diyaaraddii qaadday fannaanka reer Argentina ee Carlos Gardel sannadkii 1935, kaasoo shilka ku dhintay. Baahiyeyaasha dalka oo dhan ayaa weriyeyaal u diray Medellín si ay ugaga warbixiyaan dhacdada naxdinta leh taleefoonka.
Intii u dhaxeysay 1935 iyo 1940, raadiyaha ku yaal Colombia wuxuu helay meel ballaaran wuxuuna xoojinayaa xiriirka uu la leeyahay dhammaan dhinacyada nolosha bulshada ee dalka. Dhacdooyinka taariikhiga ah, xiriirka bulshada, dhacdooyinka siyaasadeed iyo duruufaha dhaqaale ayaa billaabay inay horumariyaan iyadoo ay jirto baahinta raadiyaha.
Sannadkii 1936-kii ayey dowladda Kolombiya dhiirrigelisay sharciga 198, kaas oo iyada lagu siiyay inay maamusho isgaarsiinta. Sida sharcigu qabo, “dhammaan gudbinta ama soo dhaweynta astaamaha, signaallada, qoraallada, sawirrada iyo dhawaaqyada noocyadooda kala duwan, iyada oo la adeegsanayo fiilooyin isdabajoog ah, raadiyaha iyo nidaamyada kale ama habraacyada calaamadaha korantada ama muuqaalka” waxay noqdeen maamulka gobolka. Tan ka sokow, dowladdu waxay mamnuucday gudbinta wararka siyaasadeed, iyada oo ciqaabtay idaacadaha aan buuxin xaaladdaan oo ganaaxyo ah.
Xeerarkani waxay muujiyeen muhiimadda ay raadiyadu u helayso inay tahay dhex-dhexaad ka shaqeeya nolosha bulshada. Saameynta bulshada ee qaraxii dagaalkii labaad ee adduunka iyo isticmaalka ballaaran ee raadiyaha ayaa ku dhammaaday caddeyn. Kolombiya, dilkii Eliécer Gaitán 1948-dii, wuxuu sababay in dowladdu ay kordhiso xakameynta macluumaadka raadiyaha.
Caracol iyo RCN:
1948-kii milkiilayaashii idaacadda La Voz de Antioquia waxay heleen kala bar xuquuqda Emisoras Nuevo Mundo. Markay ahayd Sebtember 2, 1949, waxayna billaabeen waxa ilaa maanta aan u naqaanno: Cadena Radial Colombiana SA ama Radio Caracol. Soo gudbinta silsiladdii ugu horreysay waxay ka dhacday Bogotá oo ka timid Tiyaatarka Capitol.
Isla sannadkaas, idaacadaha Nueva Granada oo ka yimid Bogotá iyo Radio Pacífico oo ka socda Cali, ayaa si wada jir ah u baahiyey golaha caalamiga ah ee Eucharistic Congress. Baahinta ayaa ahayd guul weyn, sidaa darteed milkiilayaashu waxay go’aansadeen inay si wadajir ah ugu midoobaan sameynta Radio Cadena Nacional (RCN).
Idaacadaha iskuulka iyo raadiyaha bulshada:
Laga soo billaabo 1970, idaacadaha bulshada ayaa billaabay inay soo baxaan, iyagoo ku wajahan faafinta macluumaadka xiisaha u leh bulshooyinka gaarka ah. Mawduucyada ugu soo noqnoqda waxaa ka mid ah baahinta dhacdooyinka, taageerada iskuulka, kor u qaadista mashaariicda farshaxanka iyo xirfadeed ee gobolka iyo barnaamijyada dhaqanka iyo hiddaha. Raadiyeyaasha iskuulladu waxay ka soo if baxeen Kolombiya 90-meeyadii waxayna billaabeen in badanaa lagu tababbaro iskuullada ku yaal Bogota. Guud ahaan waxaa maamula ardayda, mararka qaarkoodna waxaa isku dubbarido macalin qarnigii 19-aad.
Macnaha iyo adeegsiga erayga raadiyow:
waxaa is barbar socday horumarka dhinaca isgaarsiinta waxaana loo arki karaa seddex weji oo kala duwan: hirarka elektromagnetic iyo tijaabooyinka; isgaarsiinta wireless iyo horumarinta farsamada; iyo baahinta raadiyaha iyo ganacsiga. James Clerk Maxwell (1831-1879), aasaasihii aragtida elektromagnetism-ka, soo bandhigid ka timid 1864 oo la daabacay 1865, James Clerk Maxwell wuxuu soo jeediyay aragtiyada elektromagnetism oo ay la socdaan caddeyn xisaabeed, taas oo muujisay iftiinka isla markaana saadaaliyay in raadiyaha iyo raajaduba ay yihiin dhammaan noocyada mawjadaha elektromagnetic-ka ee ku faafaya meel bannaan. Sannadkii 1886 – 88, Heinrich Rudolf Hertz wuxuu qaaday tijaabooyin taxane ah oo caddeeyay jiritaanka mawjadaha-elektromagnetic-ka ah ee Maxwell oo leh soo noqnoqoshada waxa hadhow loogu yeedhi doono raadiyaha. Shakhsiyaad badan – hal-abuurayaal, injineerro, horumariyayaal iyo ganacsato – ayaa qaabeeyay nidaamyo ku saleysan fahamkooda gaarka ah ee kuwan iyo ifafaale kale, qaarna waxaa ka horreeyay daah-furkii Maxwell iyo Hertz. Sidaas darteed, “telefon wireless” iyo nidaamyada mowjadaha ku dhisan waxaa loo aanayn karaa dhowr “ikhtiraac”. Isbeddelka ka yimid muujinta shaybaarka ilaa qaybta ganacsiga wuxuu soo socday dhowr iyo toban sano wuxuuna u baahan yahay dadaalka xirfadlayaal badan.
Sannadkii 1878, David E. Hughes wuxuu ogaaday in dhimbilo laga maqli karo taleefan qaade inta uu tijaabinayo makarafoonkiisa kaarboon. Wuxuu sii horumariyey qalabkan ku saleysan kaarboonka ugu dambeyntiina wuxuu awooday inuu ogaado calaamado ka badan dhowr boqol oo mitir. Wuxuu tusay daahfurkiisa Royal Society sanadkii 1880, balse, waxaa loo sheegay inay tahay uun soo jiidasho sidaas darteedna looga tagey cilmi baaris dheeri ah. Thomas Edison wuxuu la kulmay ifafaalaha elektromagnetic-ka asagoo tijaabinaya telegaraafka Menlo Park. Wuxuu dareemay saameyn gudbinta aan la fahmi karin markii uu tijaabiyay telegraph. Wuxuu tan ugu yeeray xoog dhaqameed ku dhawaaqiddii Novenber 28, 1875. Elihu Thomson wuxuuna ku daabacay natiijooyinkiisa “xoog” cusub ee Edison wuxuuna mar kale u nisbeeyay soo jiidasho, sharraxaad Edison aqbashay. Edison wuxuu sii wadi doonaa sannadka soo socda inuu soo saaro Patent-ka Mareykanka 465,971 oo ku saabsan nidaamka is gaarsiinta koronto la’aanta ee u dhexeeya maraakiibta ku saleysan isku xirnaanta korantada iyadoo la isticmaalayo biyaha iyo boosteejooyinka kor loo qaaday. Haddii tani aysan ahayn nidaam raadiye, Edison wuxuu ka iibin lahaa xuquuqdiisa shatiga saaxiibkiis Gug Raadiyaha (1919 ilaa 1950s).
Sidoo kale fiiri: Raadiyaha waqtiga-dheer, taariikhda baahinta, taariikhda, idaacadda AM taariikhda, iyo baahinta FM-ka taariikhda billawgii baahinta raadiyaha wuxuu ku billaabmay abuuritaan kala duwan oo lagu horumarinayo qalabka warfaafinta raadiyaha iyo gudbiyaha oo ay ku jiraan aaladda loo yaqaan ‘crystal set’ iyo tubbooyinka faaruqa ah faakuumka ee ugu horreeya. Kuwani waxay gacan ka geystaan gudbinta hirarka raadiyaha ee baahinta masaafada dheer. Billawgii baahinta raadiyaha wuxuu ku billaabmay abuuritaan kala duwan oo lagu horumarinayo qalabka warfaafinta raadiyaha iyo gudbiyaha oo ay ku jiraan aaladda loo yaqaan ‘crystal set’ iyo tuubooyinka faakuumka ee ugu horreeya. Kuwani waxay gacan ka geystaan gudbinta hirarka raadiyaha ee baahinta masaafada dheer. Sannadkii 2011-dii bishii februari 13keedii ayaa hay’adda qaramada midowday ee unisco u aqoonsatey maali la xusuusto lana weyneyo muhiimadda raadiyaha oo ah aalaadda is gaarsiineyd ee meel walba inta badan laga hili karo, taas oo waxbarasho iyo madaddaalo dadku isku gaarsiiyaan oo iska warqabka bulsho ee caalaamka suurta gilisa milay iyo maaalo intaba.
W/Q: Xasan Maxamed Xaaji ”Duusoos”